Cadaalada Soomaaliya - BBC Somali - Aqoon Guud
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Mey, 2013, 17:52 GMT 20:52 SGA
Cadaalada Soomaaliya dib u dhiskeeda ayaa waxay ka mid tahay qorshaha dowladda si loo helo nabadgalyo iyo horumar.
Tan iyo markii ay burburtay dowladda Soomaaliya 22 sano ka hor, waxaa burburay habkii cadaalada, garsoorka iyo ilaalinta xaquuqda bini'aadanka. Cadaalad la'aanteed ayaa waxaa adag si uu dal u gaaro horumar iyo nabad.
Dowladda Soomaaliya tan iyo markii la doortay September sanadkii hore, waxay balan qaaday inay wax ka qabanayso dhinaca amniga iyo cadaalada.
Ilaa hadda dowladda waxay qabatay shir looga hadlaayo dib u habaynta cadaalada. Waxaa gobolada laga keenay ergooyin kala duwan waxayna ku taliyeen sidii loo hirgalin lahaa cadaalada, sharciga iyo garsoorka Soomaaliya.
Caalamka ayaa ka doonaya dowladda Soomaaliya, inay sheegto qorshaheeda hirgalinta cadaalada iyo siday uga caawin lahaayeen.
Wariyaha BBC Maxamed Ibraahim Macalimmo ayaa warbixintan ka soo diray.